रोनाल्डोले बालोन डी’ओर नपाएकोमा किलेनीले यसरी ब्यक्त गरे दुखः !! - Experience Best News from Nepal
रोनाल्डोले बालोन डी’ओर नपाएकोमा किलेनीले यसरी ब्यक्त गरे दुखः !!
युभेन्ट्स डिफेन्डर जर्ज किलेनीले आफ्ना सहकर्मी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले छैटौ बालोन डी’ओर जित्नु पर्नेमा आशावादी रहेको ब्यक्त गरेका थिए । गए बर्ष समेत रोनाल्डोलाई पछाडी पार्दै लुका मोड्रिचले २०१८ मा बालोन डी’ओर जितेका थिए ।
बालोन डी’ओर २०१९ रोनाल्डोले नजित्नुमा किलेनीले निकै दुखः ब्यक्त गरेका छन् । २०१८ मा रोनाल्डोले च्याम्पियन लिग रियललाई जिताएसंगै १०० मिलियनमा युभेन्ट्स प्रवेश गरेका थिए । तर उक्त बर्ष रोनाल्डोलाइ पछाडी पार्दै मोड्रिचले सानदार विश्व कप पदर्शन पश्चात बालोन डी’ओर हात पारेका थिए ।
किलेनीले मेस्सीले बालोन डी’ओर जितेकोमा खुशी रहेको तर रोनाल्डोले जित्नु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताएका थिए ।
च्याम्पियन लिग विजेता भ्यान डाइकले च्याम्पियन लिग विजेताको हकमा समेत बालोन डी’ओर पाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । गत साल पनि ग्रिज्मन, पोग्बा या एम्बाप्पेमा एक खेलाडीले जित्नु उचित हुनु र मोड्रिचले जित्नु उचित नरहेको समेत ब्यक्त गरेका थिए ।
युभेन्ट्सलाई शिर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर !!
रिभाल्डो : रोनाल्डोको बालोन डी’ओर अनुपस्थिति अनादरपूर्ण छैन !!
Ballon d'OrCristiano RonaldoJuventus